Òtù 'Apostle Amaka Care Foundation' Enyerela Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ Aka n'Idemili
Previous Article Okwu Ntụgharị Uche maka Wednezdee Ọma (WEDNEZDEE NTỤ)
Next Article Ndị Fada Nọ n'Ime-Ime Obodo Nwere Ike Ịlụ Nwaanyị -- Pope Francis
Oke mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'Ogidi bụ isi obodo okpuru ọchịchị Idemili North nke steeti Anambra, ma bụrụkwa nke dọtara ndị dị iche iche e ji okwu ha agba ìzú na ngalaba dị iche iche.
N'okwu ya na mmemme ahụ, bụ nke e jiri okwuchukwu, ekpere na ndụmọdụ wee màlite, Bishọọpụ ụka 'Brethren Gathering Ministry', bụ Bishọọpụ Edith Elisha Ezenaekwe kọwara inyere mmadụ aka dịka mmadụ ime ihe na-atọ Chineke nakwa mmadụ imezùpụta ọchịchọ obi Chineke.
Ọ kasìrì ndị ahụ ụwa na-atụ n'ọnụ obi, bụ ndị ọ ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha bụ ụmụnwaanyị dị nwụrụ anwụ, chetara ha na ọ bụ naanị Chineke nwere ike ịgbanwe ọnọdụ mmadụ, nye mmadụ ezumike ma buliekwa mmadụ elu. Ọ dụzịkwara ha ka ha ghara iji maka otu ọnọdụ siri dịrị ha wee na-etinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche, ma dụọ ha ka ha bịakute Jesus, tụkwasị Chineke obi ma dàberekwa na ya dịka ọ bụ naanị ya nwere ike ibuli ogbenye elu, lụọrọ ya ọgụ, nyere ya nchekwa ma gbanweekwa ọnọdụ ya.
Na mbụ n'okwu ya, onye hibere mmemme ahụ, ma bụrụkwa onye isi òtù ọrụ obi ebere ahụ, bụ Apọstle Amaka Akigwe kọwara na ọ bụ ụzọ ihe atọ ka ọ chịkọbaara mmemme ahụ, nke bụ inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, ikpere ha ekpere na imekwara ha ori na ọñụñụ nke emume Valentine dịka ụwa na-emerube ya n'ime izu ụka a, ma kwuo na ihe mere o ji eme nke ahụ bụ ịrụzùpụta ihe Chineke zìrì ya nakwa ime uche ya.
O kwuru na e nweghị ebe a na-elekọta ụmụaka enweghị nne na nna n'okpuru ọchịchị ahụ, ma kwuo na nke ahụ sò n'otu n'ime ihe ndị ọ na-achụsò ịhụ na e nwere, tinyekwuoro na inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka so n'otu ihe na-echu ya ụra, ma bụrụkwa ihe na-akpali ya o ji emegasị ihe ndị ahụ ọ na-eme site n'òtù ahụ, bụkwa nke ọ na-eme ọtụtụ ùgbòrò kwa ahọ ọbụla.
Ọ rịọkwazịrị ndị aka ji akụ ka ha cheta ndị ha kà mma ma tụnyekwa ụtụ nke ha n'ime ka ọnọdụ kawanyere ha mma, dịka Christ onwe ya mere ka a mara n'akwụkwọ nsọ na onye ọbụla nke meere otu n'ime onye dịkarịchara ntà n'ime ndị ya ihe ọbụla, bụ Ya onwe Ya ka o meere ya.
N'okwu nke ha n'otu n'otu, onyeisi oche na mmemme ahụ, bụ Maazị Sam Mọdebe, nke Oriakụ Ifeọma Mọdebe nọchitere anya ya; bishọọpụ ụka 'Rock of Fire Global Ministry' bụ Bishọọpụ Mike U. Chukwudum; na 'Rev. Dr.' Francis Chukwunweike nke ụlọ ụka 'Greater Grace and Fire Assemby' kọwara inyere mmadụ aka dịka ọrụ dịịrị onye ọbụla, na-agbanyeghị ole onye ahụ nwere, ma kọwaakwa mmemme ahụ dịka nke magburu onwe ya n'ihi na ọ bụghị naanị na e sitere na ya wee nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, ma nke elu ahụ ma nke ime mmụọ; kama e sitekwara na ya mekwa ka ọtụtụ n'ime ha bịakute ma nabata Christ dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha, bụ nke kachasị mkpa na ndụ mmadụ ọbụla chọrọ ịbà alaeze.
Ha tòkwara nwa amadi chịkọbara ihe mmemme ahụ, bụ Apọstle Amaka Akigwe, kpee ka Chineke gaa n'ihu ịgbà ya ume na ịgọzi ya, dụọ ya ka o jide ka o ji, ma kpọkukwazie onye ọbụla ka o ñòmie atụmatụ inyerịtara ibè ya aka.
A nọrọ na mmemme ahụ wee kesaa ọtụtụ ihe onyinye na ihe oriri dị iche iche, tinyere ọgwụ ahụ ike na ihe ndị ọzọ e ji enyere ndụ aka, nye ndị ahụ ụwa na-atụ n'ọnụ, bụ ndị sitere obodo dị iche iche n'okpuru ọchịchị Idemili North.